Ka kaabta Soo Celinta iPhone - Sida loo soo celiyo ka iPhone gurmad files
> Resource > iPhone > Sidee soo celinta iPhone ka kaabta
1 Ladnaansho iPhone Files
Kabsado iPhone Xiriir
Kabsado iPhone Photos
Kabsado iPhone Video
Kabsado iPhone Notes
Kabsado iPhone Call Taariikhda
Kabsado iPhone Kalandarada
Kabsado iPhone farriinta codka
2 Celinta iPhone
Kabsado iPhone ka dib markii Celinta
Soo Celinta iPhone Xiriir
Soo Celinta iPhone Photos
Soo Celinta iPhone aan Lugood
Soo Celinta iPhone ka dib markii jailbreak
Ka Lugood Soo Celinta iPhone
Ka kaabta Soo Celinta iPhone
Ka kaabta iPad Soo Celinta iPhone
Soo Celinta Xiriirada ka Lugood
iPhone Soo Celinta Dhibaatooyinka
Messages Undelete iPhone
Kaabta Undelete iPhone
IPhone Undelete Notes
Undelete iPhone Apps
IPhone Free Data Recovery Software
IPhone Best Data Recovery Software
macruufka Data Recovery Software
Sida loo soo celiya iPhone ka kaabta
Luminta xogta ka iPhone dhici kartaa sababo badan, oo ay ku jiraan: aad iPhone waa jabtay ama la xado; dhammaan xogta ku iPhone masaxayo marka dayactirka; xogta lumiya ka dib hagaajinta macruufka; si qalad ah tirto faylasha ka; Warshadda resetting. Cidina ma saadaalin karto markay ku Dhaedo Musiibo ku dhufan doonaa, laakiin ay dhacdo. Sidaa darteed, ha iloobin in aad ka dhigi hayaan joogto ah xog muhiim ah aad. Markaas waxaad si fudud u soo celin kartaa iPhone ka files gurmad, sida soo celinta ka hayaan hore ee Lugood ama iCloud.
Qeybta 1: ka ee kaabta Previous Soo Celinta iPhone (Selective Soo Celinta)
Qeybta 2: iPhone Soo Celinta ka kaabta in Lugood (Dhan Celinta)
Qeybta 3: ka ee kaabta Soo Celinta iPhone via iCloud (Dhan Celinta)
Si kastaba ha ahaatee, wax yar tagaan adag ah. Waxaad ayan soo celin kara qayb ka mid ah macluumaadka ama Macdan content wax ka hayaan Lugood iyo iCloud, laakiin Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recvery) , ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) ayaa kaa caawin kara inaad yeeshaan. Waxaa kuu saamaxayaa inaad ku eegaan iyo soo celinta file gurmad u eegista.
* Ceshano xogta laga qalabka macruufka, gurmad iCloud iyo Lugood gurmad (oo ay ku jiraan mid ka mid Windows XP).
* xogta Kulanka Xiisaha Leh hor kabashada sida xiriirada, sawiro, fariimaha, wac taariikhda, iwm
* socon la macruufka dambeeyay 9 iyo taageerada iPhone iPone 6S Plus / iPhone 6S / 5S / 5C / 5 / 4s / 4, iPads oo dhan iyo in ka badan.
* dib u data waayay tirtirka, khasaaraha qalab, JAILBREAK, macruufka hagaajinta ama warshad goobaha soo celiyo.
Fiiro gaar ah: Labada versions of barnaamijyada sidoo kale fursad kuu siinayaan in iskaan ceshan xogta ka iPhone si toos ah, marka aanad haysan gurmad Lugood / iCloud.
Next, aynu hubi sida loo soo celin iPhone ka gurmad la Wondershare Dr.Fone ee macruufka in tallaabooyinka.
Tallaabada 1 Skaanka Lugood ama iCloud gurmad
Kabsado Lugood ee kaabta File: Marka aad doorato this mid ka mid ah, oo dhan files gurmad lagu soo bandhigi doonaa si toos ah. Halkan kaliya u baahan tahay in aad doorato mid ka mid ah in aad rabto in la soo celiyo, iyo inuu sii galo "Start Scan".
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone ama macruufka kaliya iskaan iyo Macdan xogta laga gurmad Lugood ee aad. Waxa aan xusuusan doono wixii xog ah. Dhammaan xogta kaliya loo akhrin karaa oo ku badbaadi naftaada by.
Kabsado iCloud File kaabta: Marka aad doorato this mid ka mid ah, waxaad u baahan tahay inay la soo wareegto in aad xisaabta iCloud hore. Markaas waxaad kala soo bixi kartaa oo Macdan kasta oo file gurmad in aad xisaabta iCloud, si loo hubiyo waxa ku jira waxaa ka mid ah.
Fiiro Gaar ah: Waa 100% ammaan ah inay la soo wareegto in aad xisaabta iCloud. Wondershare Qaadataa gaarka ah si dhab ah. Dr.Fone Haysan maayo wixii macluumaad ah oo ka kooban ee aad xisaabta iyo xogta. Ayaa soo bixi files gurmad kaliya badbaadiyey on your computer deegaanka gaar ah.
Tallaabada 2 ka Lugood / iCloud Soo Celinta gurmad iPhone
Halkan dhammaan faylasha in gurmad ah ayaa la soo bandhigay, oo aad ku eegaan karo iyo fiiri mid mid. Ka dib markii xiisaha badan, ka hubi kuwa aad dib u rabto iyo waxaan iyaga ku badbaadin.
Fiiro gaar ah: Wondershare Dr.Fone sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si toos ah iskaan ceshan xogta ka iPhone iPhone 6S Plus / iPhone 6S / iPhone 6 Plus / iPhone6 ​​/ 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS / 3G, marka aanad haysan Lugood ama iCloud gurmad.
Download version tijaabo ah Wondershare Dr.Fone hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo hadda.
Tallaabada 1 Run Lugood iyo xiriiriyaan iPhone
First of dhan, xiriiriyaan iPhone in computer iyo ordi Lugood. Marka ogaadaa aad iPhone, riix magaca iPhone hoos menu ee Device dhanka bidix. Markaasay aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 2 Dooro gurmad ah iyo ku celin si aad iPhone
Si aad u soo celin aad iPhone ka gurmad ka weyn, guji "Soo Celinta ka kaabta ..." button ee goobada cas ee suuqa kala kor ku xusan. Markaas dooran file gurmad on suuqa kala pop-up ka ah iyo ku celin in aad iPhone.
Fiiro gaar ah: Sidaas, waxaad u baahan tahay in la soo celiyo gurmad oo dhan si uu u bedelo dhammaan xogta ku saabsan iPhone, iPad ama iPod taabto. Haddii aadan rabin in la soo celiyo gurmad oo dhan ama waayi xogta laga hayo on qalab aad, waxaad dooran kartaa habka Qeybta 1 .
Sida laga gurmad Lugood soo celinta iPhone, Apple sidoo kale ma ogola in aad ku eegaan waxa ku jira iCloud files gurmad. Waxaad sidoo kale u soo celin karaa oo gebi ahaanba, ama waxba. Ka hor inta soo celinta, aad u baahan tahay si aad u iPhone sidii mid cusub, si aad u soo celin karto gurmad ka iCloud. Just u samaysaan si waafaqsan tallaabooyinka hoose.
Tag Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings.
Marka aad ku dhameysatay kaalinta tirtiro dhammaan macluumaadka iyo goobaha aad iPhone, aad iPhone bilaabi doonaa oo waxaad bilaabi kartaa waxa ay haatan u dejinta. Marka aad tahay tallaabo ah sida ku cad ee xaq.
Dooro mid ka mid ah goobada cas: Soo Celinta ka kaabta iCloud. Markaas waxaad dooran kartaa raad raac aad rabto iyo waxa ay soo celiyo si aad iPhone.
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro iPhone Xiriir